Isbeddelka Cimilada Dunida: 2017
Saamaynta Isbeddelka Cimilada ee Abaaraha
Wax walbaa Qaddarta Ilaahay SW ayay ku yimaadaan, isla-markaasna wax walba Ilaahay SW sabab ayuu u yeelay. Isbeddelka cimiladu waa khatar jirta oo inta badan saynisyahannadu welwel xooggan ka muujiyeen; welibana khatartaas ay sababteeda bani-aadamka dusha uga tuureen…- Ilaahay SW addoomadiisa ma dulmiyee; addoomadu ayagaa naftooda dulmiya - .
Isbeddelka cimilada dunida oo inta badan loola jeedo sare u kaca heerkulka dunida ee xawliga ku socda; ayaa sababa aafooyin badan oo ka dhaca deegaanno kala duwan. Aafooyinkaas waxaa ka mid ah abaaraha!!! Haddaba waxaan maqaalkan ku eegaynaa sida isbeddelka cimiladu u saameeyo abaaraha.
Ugu horreyn si aan si fudud ugu fahanno; waa inaan dib u xasuusanno hawooyinkii Greenhouse-gaska iyo saameynta ay ku leeyihiin sare u kaca heerkulka dunida. Hawooyinkan oo atmosfeerka Dhulka ku sii badanaya qiiqa badan ee Dhulka ka tagay awgiis; ayna ugu sii daran tahay hawada kaarboonka “CO2”, ayaa xanniba in badan oo ka mid ah kulkii uu Dhulku dib hawada sare isaga tuuri lahaa (long wave radiation) si uu u yeesho heerkul miisaaman. Arrintaasu waa tan keentay in uu heerkulka Dhulku sare u kaco; haddii aan si kale u qorana – atmosfeerka oo ay ku sii badanayaan hawooyin Dhulka cabburin kara ayaa sababa inuu kulayka Dhulku sii bata sanadba sanadka ka dambeeya. Haddaba haddii uu kulaylku ka bato heerkii looga bartay, maxaa ka dhalan kara? Saamayn intee le’eg ayuu ku yeelan karaa noolaha iyo deegaankiisa ku xeeran?
Sare u kaca heerkulku wuxuu sababaa uumi bax xad-dhaaf ah oo ku yimaada badaha, webiyada, haraha, ceelasha, ilaha, baraagaha iwm. Sidoo kalena dhulka berriga ah iyo dhirta ku taalba ilaa xad ayuu engajiyaa/qallajiyaa. Wuxuu kaloo carrada/ciidda ka baabi’yaa nuxurkii iyo nafaqadii ay lahayd taasoo ka dhigta mid ay dabayshu si sahlan u bitiso/buubiso isla-markaasna aan u suubban wax-soo-saar beereed iyo mid daaqba. Intaas oo jirta haddii uu roobku soo daaho waan qiyaasi karnaa dhibaatada abaareed ee ka dhalan karta deegaankaas; waana sababta loo yiri isbeddelka cimiladu saamayn ayuu ku leeyahay abaaraha. Waxaa intaas dheer oo xusid mudan in carradii dhimatay ayan inta badan ceshan Karin biyaha roobka, halkaas oo ay ka dhashaan daadad lixaad leh, deedna dhulkii uusan wax quman soo saari Karin.
Arrinta welwelka weyn lihi waa ayada oo dhibaatadu aysan dhirta iyo ciidda keliya ku ekaanaynin ee ay saamayn weyn ku yeelato dadkii beeralayda ama xoola-dhaqatada ahaa ee sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsanayd beeraha iyo xoolaha. Tusaale ahaan kolka beeruhu wax-soo-saarka yareeyaan, xooluhuna le’daan, dadkuna wuu macaluulaa, harraadaa, xanuunsadaa, baro-kacaa; welibana marar la sheegaa dhimasho.
Dalkeenna Soomaaliya waa ka mid deegaannada abaaraha ba’ani soo food saaraan dunida; dhibaatooyin iyo khasaare naf iyo maalba lehna gayteen. Sidaa darteed waa lagama maarmaan annaga oo Ilaahay SW Qaddartiisa aaminsan in aan badinno Baryada Eebbeheen si uu inooga dul-qaado abaarta daran ee maanta ka jirta guud ahaan Soomaaliya. Deedna waa in aan wax ka baranno wixii na soo maray oo aan si cilmiyaysan u dhaqaalayno deegaannada uu Ilaahay SW nagu mannaystay.
Abdiaziz Haji Bashir Ismail
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 1:05 PM No comments:
ABAARAHA - 1
Abaari waxay dhacdaa kolka ay roob yaraantu baahdo, saameyn weynna ku yeelato biyaha helitaankooda, isla-markaana ay engajiso dhulkii daaqa iyo beerashadaba ku habboonaa oo ay ku xirnayd nolosha aasaasiga ah ee bulsho. Arrintanina saameyn daran ayay ku yeelan kartaa haddii ay bulshadu tahay mid aan horumarsanayn.
Muddada abaartu jiraysaa waa ay dheeraan kartaa, dhulka ay ka jirtaana wuu ballaarnaan karaa; taas oo sababi karta barakac iyo qax baahsan waayo dadka garaadkooda ayaa siinaya inay u qaxaan meel nolol dhaanta goobta ay abaartu ku habsatay.
War-bixin ay qortay Qaramada Midoobay ayaa lagu xusay in sanad walba dunida aan ku noollahay uu dhul baaxad ahaan le’eg dalka Ukrain; isla-markaasna carro-san ah uu halaagsamo oo boorku duulo abaar awgeed.
Abaaraha sii kordhaya soona noqnoqonaya waxaa ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ka dhashay
"ISBEDDELKA CIMILADA DUNIDA".
Ugu dambeyna; abaaraha waxaa ka dhasha dhibaatooyin ay ka mid yihiin:
· -Biyo la’aan
· -Cunto yaraan / gaajo
· -Nafaqa-darro/caafimaad xumo
· - Barakac/qax iyo deganaansho la’aan
· - Barakac/qax xayawaan, shimbiro iyo cayayaanba
· - Nabaad-guur
· -Dabaylo boor wata
· -Dagaallo / biyaha iyo baadka yar
f Abdiaziz Hagi Bashir Ismail
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 4:14 PM No comments: